sbs - Synonyms of sbs | Antonyms of sbs | Definition of sbs | Example of sbs | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for sbs
Top 30 analogous words or synonyms for sbs
D.O. (အဆိုတော်) အဲဒီနှစ်၏ နောက်ပိုင်းတွင် SBS ရုပ်သံ၏ "It's Okay, That's Love" ဒရာမာ ရုပ်သံစီးရီးတွင် ဟန်ကန်ဂ်ဝူး အဖြစ် ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။.
အမွှာကွေဆာ အမွှာကွေဆာ (ကွေဆာစုံတွဲ သို့မဟုတ် SBS 0957+561, TXS 0957+561, Q0957+561 သို့မဟုတ် QSO 0957+561 A/B ဟုလည်းသိထား) သည်
ပတ်ချန်ရိုး (အဆိုတော်) ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင့် ချန်းယောသည် "Royal Villa" ရုပ်သံစီးရီးတွင် ဧည့်သည်သရုပ်ဆောင် အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သည်။ I၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် SBS ၏ "Law of the Jungle in Micronesia" ရုပ်သံစီးရီးတွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီး "Roommate ရုပ်သံစီးရီး"တွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့ရာ အချိန်ဇယားရှုတ်ထွေးမှုကြောင့် စက်တင်ဘာလတွင် နှုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် "Salut d'Amour" ရုပ်ရှင်တွင် ကြော်ငြာမှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့ရာ ထိုရုပ်ရှင်တွင် "EXO Next Door" ဝက်ဘ်ရုပ်သံစီးရီးတွင် သူနှင့်အတူ သရုပ်ဆောင်ခဲ့သော Moon Ga-young လည်းပါဝင်သည်။ သူသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် "Dating Alone ရုပ်သံစီးရီး "တွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။